Mumwe Murwiri weKodzero Okurudzira Kuti VaMnangagwa Vatongwe kuHague
Mumwe murwiri wekodzero, VaGastaff Kativu, vakaparura neChitatu gwaro renyunyuto padandemutande rekuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nemutevedzeri wavo, VaConstantino Chiwenga, vatongwe kumatare ekuHague nenyaya yekutyora kodzero dzavanopomerwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira ivo.
Gwaro iri rinonzi “Complete knock down of the Establishment,” muchidimbu richinzi the CKD Campaign.
VaKativu, avo vakasungwa mushure mekuratidzira kukongiresi yechimbi-chimbi yeZanu PF muna Zvita, vakaudza vatori venhau kuti donzvo ravo nderekuti vese vane mazita akanyorwa munyaya dzeGukurahundi nekutyorwa kwekodzero munyika, kusanganisira pakatorwa masimba nemauto, vanofanirwa kuongororwa kumatare ekunze kuti vacheneswe mumhosva dzavanopomerwa.
Vakati vatungamiri ava vave nemasimba akawanda zvikuru zvekuti havaoni matare emunyika achitonga nyaya idzi zvizere sezvo vanhu ava vari muhutungamiriri.
VaKativu vakati hutungamiriri hwemuAfrica huripo, kusanganisira hutungamiri huri muZimbabwe, huri kutadza kushandisa zviwanikwa mukusimudzira hupenyu hwevanhu izvo zvavari kutarisirawo kuchinja.
VaKativu vakati kunyange panehutungamiri hutsva hapana zvati zvachinja munyika munyaya dzekuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Vakatiwo mwana wavo ane zita ravo akange achitevererwa zvichifungidzirwa kuti ndivo.
VaKativu vakashorawo zvikuru nziyo yemumwe muimbi, Mukudzei Mukombe anozivikanwa nezita rekuti Jah Prayzah nekuimba nziyo yekuti “kutonga kwaro” iyo inoridzwa panenge pane mutungamiriri wenyika VaMnangagwa nguva zhinji avo vane zita remadunhurirwa rekuti Garwe.
VaKativu vakati nziyo iyi inofadza vamwe asi ichitsamwisawo vamwe vakati nziyo dzinofanirwa kuumba nyika kwete kuparadzanisa vanhu. VaKativu vakatiwo muimbi uyu ari kuzviurayira basa muneramangwana.
Vari munezvematongorwo enyika huye vari mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, VaKurauone Chihwayi, vanoti vanobatana nemunhu wese zvake anoda kuti vanoita mabasa akaipa vamire pamberi pematare edzimhosva.
Gurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, vakaudza Studio7 parunhare nezuro kuti munhuwo zvake haakwanisi kuendesa nyaya kuInternational Court of Justice iyo inotora nyaya dzine chekuita pakati penyika nenyika.
Vakatiwo kuInternational Criminal Court munhuwo zvake anofanirwa kutevedzera nzira dzakatarwa dzinosanganisira kuti munhu anofanirwa kutanga aendesa nyaya dzake kumatare emunyika dzisati dzaenda kudare iri.